Wararka - Laanta Xisbiga ee Kooxda Korantada ee Hengyi, oo ah mawduucyada maalinlaha ee xisbiga ee safarka "Luulyo Cas" ee 2020
Luulyo 1, 2020 waa sannad -guuradii 99 -aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha. Si aan u dhaxalno oo aan u sii wadno dhaqannada wanaagsan ee xisbiga iyo ruuxa waddaniyadda, waxaan si buuxda u hirgelin doonnaa ruuxa khudbaddii muhiimka ahayd ee Xoghayaha Guud Xi Jinping intii uu kormeerka ku joogay Zhejiang. "Ku dhaqma hawlgalka asalka ah", baro oo hag xubnaha iyo kaadirka xisbiga si ay si qoto dheer wax u bartaan, u fahmaan, una dhaqmaan fikirka hantiwadaagga leh astaamaha Shiinaha ee xilligan cusub, oo si joogto ah u xoojiya wacyiga fikirka, siyaasadda iyo ficilka "ilaalinta himiladii hore iyo anigoo u malaynaya hadafka ", kuna adkaysanaaya in la sii hayo Mowqifyada taagan, hormuudka u ah kuna dadaalaya heer sare, si ay gacan weyn uga geystaan ​​sidii loogu guuleysan lahaa guusha ka -hortagga iyo xakamaynta faafa, bulshada dhaqaalaha, iyo horumarinta shirkadaha. Ku dhiiri geli dhammaan xubnaha xisbiga iyo kaadiriinta inay ka qaybqaataan hawlaha hormuudka u ah iyo ku -dadaalka wanaagga, oo weliba sii cayaar doorka ururka xisbiga oo ah qalcad dagaal iyo hormuudka iyo doorka ku dayashada leh ee xubnaha xisbiga. Ka dib baaritaan iyo go'aan uu qaatay Guddoomiyaha Kooxda Korantada ee Hengyi Lin Hongpu, Madaxweyne Lin Xihong iyo laanta xisbiga ee kooxda, 5tii Luulyo (Axad), waxaa la abaabulay munaasabadda maalinta xisbiga ee mawduuca safarka "Luulyo Cas".
10 -kii subaxnimo, meel u dhow Tuulada Yantou, ee Gobolka Yongjia, ayaa si lama filaan ah hortaada waxaa kaaga soo muuqday farshaxan, taas oo dadka ka yaabisay. "Ciidankii Saddex iyo Tobnaad ee Shaqaalaha Shiinaha iyo Ciidankii Cas ee Beeralayda" ee roobka iyo ceeryaamo qiiqa leh ayaa ah mid aad u xoog badan oo awood leh, waxayna bilaabeen inay u sheegaan taariikhdii kacaanka ee adkayd ee quruxda badnayd-magaalada Ciidanka Cas ee koonfurta Zhejiang!
Xusuus -qorka Ciidanka 13aad waa dhisme qadiimi ah, oo la dhammaystiray 2000. Waxay ka dhex muuqataa taallada haybadda leh iyo goobta milateriga ee qadiimiga ah. Hareeraha geedaha cagaaran, muuqaalku waa qurux. Madxafku wuxuu soo bandhigayaa agabyo taariikhi ah oo ka tirsan Ciidanka Saddex iyo Tobnaad iyo walxaha dhabta ah sida madaafiicda, mindiyaha iyo qoryaha ay adeegsadaan askarta Ciidanka Cas!
Iyada oo loo marayo munaasabadan maalinta xisbiga ee mawduuca, dhammaan xubnaha xisbigu waxay heleen waxbarasho waddaninimo oo qoto dheer iyo waxbarashada ruuxa xisbiga, waxayna leeyihiin faham qoto dheer oo ku saabsan waajibaadkooda xubinnimada xisbiga. Horay u sii wad ruuxa kacaanka, ku samee shaqadaada fikrado iyo caqiido adag, xirfad sare, iyo qaab shaqo oo adag si aad gacan uga geysato horumarinta meheradda!
Waqtiga dhejinta: Jul-09-2020